All-Star NAB ပြပွဲမှအဓိကကျသောကဏ္ S သည်အားကစားသစ်များကိုတက်ပြီး New Heights သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ @NABShow #NABShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 NAB ပြရန် » all-စတား NAB ပြရန် Keynote တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမိုဃ်းတိမ်၌နယူးမြင့်စေရန်တိုက်ရိုက်အားကစားကြာပါသည်။ @NABShow #NABShow
- CBSi, Hulu, LA ကညှပ်, NASCAR နှင့် Pac-12 ကွန်ရက်ထံမှ Executives ဘယ်လိုမိုဃ်းတိမ်ကို, မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့် AI အဖမ်းယူပရိသတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုထုတ်ဖေါ်, မှတ်တမ်းများကြည့်ရှုခြိုးဖကျြ, ပရိသတ်တွေပိုပြီးထိန်းချုပ်ပေးနှင့်အနာဂတ်အားကစားအတွေ့အကြုံများ reinvent -
NAB ပြရန် မိုဃ်းတိမ်ကိုနည်းပညာအားကစားအသံလွှင့်ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်နှင့်ပရိသတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကားမောင်းနေသည်ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ထားတဲ့သီးသန့်ပြောရမှာဆွေးနွေးမှု feature ပါလိမ့်မယ်။ အမေဇုံက Web Services က, Inc (AWS) ကနေထုတ်လုပ်အဲဒီ session, တစ်ဦး Amazon.com ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်လွှင့်စူးစမ်းလေ့လာကြလိမ့်မည်, နှင့် Over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ဝန်ဆောင်မှုပေးအားကစားပရိသတ်တွေအသစ်အတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမိုဃ်းတိမ်ကို-based မီဒီယာ workflow နှင့်ခေတ်မီအတုထောက်လှမ်းရေးန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ခေါင်းစဉ်အဆိုပါပင်မအဆင့် session တစ်ခု, "လယ်ကွင်းကျော်လွန်: ဘယ်လိုအားကစား Pioneers မိုးတိမ်အတွက် 360 ပရိတ်သတ်အတွေ့အကြုံ Powering နေကြတယ်"တနင်္လာနေ့, 8 မှာဧပြီလ2အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်: 30 ညနေ
အိမ်မှာသို့မဟုတ်အားကစားကွင်းများတွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အားကစားပရိသတ်တွေယနေ့ကာလအတွင်းနှင့်မိုဘိုင်း Device များ, app များနှင့်လူမှုမီဒီယာတစ်ခု ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ်ဂိမ်းအပြီးရှေ့တော်၌, ပိုမိုနက်ရှိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာမျှော်လင့်ထား။ NFL.com ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကျွမ်းကျင်သူစင်သီယာ Frelund အဖြစ်က high-profile ကိုအားကစားခေါင်းဆောင်များမျိုးဆက်သစ်မီဒီယာ Workflows အားကစားပရိသတ်တွေများအတွက်မြှင့်တင်ရန်, စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများဖန်တီးမည်သို့သူတို့ရဲ့အသိအမြင်ကိုမျှဝေဆွေးနွေးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဟောပြော Stephanie လုံ, CBS အားကစားဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများပါဝင်သည်; ရာဖေးလ် Soltanovich, Hulu မှာ Software များဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; Scott Sonnenberg သည် LA ကညှပ်ဘို့အကြီးအကဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရာရှိ; ခရစ် Witmayer, NASCAR မှာထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မီဒီယာသစ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ညွှန်ကြားရေးမှူး; နှင့် Mark Kramer, Pac-12 ကွန်ယက်များအတွက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာ။
"အားကစားပရိသတ်တွေ '' နောက်ဆုံးပေါ်ပြိုင်ကား action ကိုအဘို့အစာစားချင်စိတ်ကို, နောက်ဆုံးသတင်းများ, နှင့်သတင်းအချက်အလက် insatiable ဖြစ်ပါတယ်" ဟု NAB ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်ဆမ် Matheny ကဆိုသည်။ "ဒီ session တစ်ခုအတုထောက်လှမ်းရေးအကူအညီနဲ့အားကစားခေါင်းဆောင်များနှင့်တူမိုဃ်းတိမ်နှင့် tools များယနေ့ပရိတ်သတ်များအသစ်အတှေ့အကွုံမြားပေးသဖြင့်, အနာဂတ်ရရှိထားသူအဘယ်အရာကိုမှာတစေ့တစောင်းများကိုမည်သို့မည်ပုံတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုလိမ့်မည်။ "
အဆိုပါပြပွဲ AWS အားဖြင့် encoded နှင့်ကယ်လွှတ်ပါလိမ့်မည်။ AWS မှာအများပြည်သူလက်လှမ်းမီအဘို့အမေဇုံ EC2, အမေဇုံ elasticity Load ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း, AWS ဒြပ်စင်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, အမေဇုံလမ်းကြောင်း 53, နဲ့ Amazon CloudFront ပါဝင်သည်တစ်ခု AWS မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာကနေတဆင့်ထိုအဖြစ်အပျက်၏တိုက်ရိုက်စီးအပ်မည် live.awsevents.com။ တစ်ဦးကဗီဒီယို On-demand (VOD) ပိုင်ဆိုင်မှုမှာအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် live.awsevents.com.
NAB ပြရန်, ကျင်းပဧပြီလ6- Las Vegas မှာ, NV, USA တွင် 11, 2019, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာ၏ဆုံလွှမ်းခြုံကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်စုံဆုံးစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ 100,000 နိုင်ငံများနှင့် 165 + ပြသခဲ့သည်ထံမှနီးပါး 1,600 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတ်လမ်းပြောပြစီးပွားရေးကိုလောင်စာကြောင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, NAB ပြရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘဝမှအကြောင်းအရာများကိုရောက်စေဖို့ကျင်းပရမည်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ခရီးစဉ် www.nabshow.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-03-28
ယခင်: မြက်ချိုင့် NAB ပြရန် 2019 မှာကင်မရာများကိုအဘို့ကို Creative ပါဝါ၏တစ်ဦးက New ကိုကြင်နာလွှတ်
နောက်တစ်ခု: NAB 2019 မှာ FilmLight ခေတ်သစ်အရောင်ပြီးနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့ပိုဖြည့်စွက်